အၾကပ္ အတည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို (၇) ရက္ အတြင္းလြတ္ေျမာက္ေစႏိုင္တဲ့ အဓိဌာန္…. – Let Pan Daily
Let Pan | September 4, 2020 | Knowledge | No Comments
တနဂၤေႏြေန႔ က ေန စၿပီး အဓိဌာန္ ဝင္ပါ ။
တနဂၤေႏြေန႔.. တနဂၤေႏြ ေထာင့္ ေမတၱာ သုတ္ေတာ္ ၆ ေခါက္ ၊ တနဂၤေႏြေန႔ ဖြားျမတ္စြာဘုရားရွင္ အေပါင္း ကို ရည္မွန္းၿပီး ကန္ေတာ့ပါ ။
မိမိ ကုသိုလ္ အလုပ္ အားလုံး ၿပီးစီးသည့္ အခါ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္နတ္မင္းႀကီးကို အမႈးထားၿပီး ေဝေနယ် တို႔ကိုေမတၱာပို႔ အေမွ်ေဝပါ ။
တနလၤာေန႔ ေသာၾကာေထာင့္ ေမတၱာသုတ္ေတာ္၂၁ ေခါက္ ၊ ေသာၾကာေန႔ ဖြာ းျမတ္စြာဘုရားရွင္ အေပါင္းကို ရည္မွန္းၿပီး ကန္ေတာ့ပါ ။ မိမိ ကုသိုလ္ အလုပ္ အားလုံး ၿပီးစီးသည့္ အခါတနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္နတ္မင္းႀကီးကို အမႈးထားၿပီး ေဝေနယ် တို႔ကိုေမတၱာပို႔ အေမွ်ေဝပါ ။
စသည္ျဖင့္ အထက္ပါ အတိုင္း အတိုခ်ဳံးခြင့္ ျပဳပါ ခင္ဗ်ာ အဂၤါေန႔ ရာဟုေထာင့္ ေမတၱာ သုတ္ေတာ္ ၁၂ ေခါက္ ၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ ၾကာသာပေတးေထာင့္၊ ေမတၱာသုတ္ေတာ္ ၁၉ ေခါက္၊
ဟိုတစ္ခါကြၽန္ေတာ္ တင္ေပးဖူးသည့္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေစသည့္ အဓိဌာန္မ်ိဳး ကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါ ။ အဲဒီ့ အဓိဌာန္ကေတာ့ အလုပ္မရွိလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္ပို ေကာင္းခ်င္လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဝင္ႏိုင္ေလေကာင္း ေလပါပဲ ။
ကံေႂကြးဝဋ္ေႂကြး မဟုတ္ခဲ့ ရင္ေတာ့ သိသိသာသာ ကိုပဲ အဓိဌာန္ ျပည့္ေျမာက္ၿပီး တစ္ပတ္ခန႔္ အတြင္းမွာကို .. အခက္အခဲမ်ား ေျပေလ်ာ့သြားတတ္ ပါတယ္ခင္ဗ်ား ။
ဘုရားမွတစ္ပါး ကိုးကြယ္ရာ မရွိ ၊ တရားမွ တစ္ပါး ကိုးကြယ္ရာ မရွိ၊ သံဃာမွ တစ္ပါး ကိုးကြယ္ရာ မရွိပါခင္ဗ်ား ။ ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္ရႏိုင္သလို တစ္ကယ္ျဖစ္ခ်င္ တစ္ကယ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔သာ လိုအပ္ပါေၾကာင္း အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ၾက ပါေစ သတည္း ။
အကြပ် အတည်း အမျိုးမျိုး ကို (၇) ရက် အတွင်းလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ အဓိဌာန်….
တနင်္ဂနွေနေ့ က နေ စပြီး အဓိဌာန် ဝင်ပါ ။
တနင်္ဂနွေနေ့.. တနင်္ဂနွေ ထောင့် မေတ္တာ သုတ်တော် ၆ ခေါက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ဖွားမြတ်စွာဘုရားရှင် အပေါင်း ကို ရည်မှန်းပြီး ကန်တော့ပါ ။
မိမိ ကုသိုလ် အလုပ် အားလုံး ပြီးစီးသည့် အခါ တနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်နတ်မင်းကြီးကို အမှုးထားပြီး ဝေနေယျ တို့ကိုမေတ္တာပို့ အမျှေဝေပါ ။
တနင်္လာနေ့ သောကြာထောင့် မေတ္တာသုတ်တော်၂၁ ခေါက် ၊ သောကြာနေ့ ဖွာ းမြတ်စွာဘုရားရှင် အပေါင်းကို ရည်မှန်းပြီး ကန်တော့ပါ ။ မိမိ ကုသိုလ် အလုပ် အားလုံး ပြီးစီးသည့် အခါတနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်နတ်မင်းကြီးကို အမှုးထားပြီး ဝေနေယျ တို့ကိုမေတ္တာပို့ အမျှေဝေပါ ။
စသည်ဖြင့် အထက်ပါ အတိုင်း အတိုချုံးခွင့် ပြုပါ ခင်ဗျာ အင်္ဂါနေ့ ရာဟုထောင့် မေတ္တာ သုတ်တော် ၁၂ ခေါက် ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကြာသာပတေးထောင့်၊ မေတ္တာသုတ်တော် ၁၉ ခေါက်၊
ကြာသပတေးနေ့..စနေထောင့်.၊ မေတ္တာ သုတ်တော်၁၀ ခေါက် ၊ သောကြာနေ့…ဗုဒ္ဓဟူးထောင့် ၊ မေတ္တာသုတ်တော်..၁၇ ခေါက် ၊စ နေနေ့ အင်္ဂါထောင့် ၊ မေတ္တာသုတ်တော် ၈ခေါက် ၊
တနင်္ဂနွေနေ့ တနင်္လာထောင့် မေတ္တာသုတ်တော် ၁၅ ခေါက် ။ မေတ္တာသုတ်တော် အဓိဌာန် ပြီးပါပြီ ။ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ တနင်္ဂနွေထောင့် ကနေ စပြီး အဓိဌာန် ဝင်လာခဲ့ တာပါ ။
ဟိုတစ်ခါကျွန်တော် တင်ပေးဖူးသည့် အလုပ်အကိုင် ရရှိစေသည့် အဓိဌာန်မျိုး ကဲ့သို့ မဟုတ်ပါ ။ အဲဒီ့ အဓိဌာန်ကတော့ အလုပ်မရှိလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ပို ကောင်းချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဝင်နိုင်လေကောင်း လေပါပဲ ။
ကံကြွေးဝဋ်ကြွေး မဟုတ်ခဲ့ ရင်တော့ သိသိသာသာ ကိုပဲ အဓိဌာန် ပြည့်မြောက်ပြီး တစ်ပတ်ခန့် အတွင်းမှာကို .. အခက်အခဲများ ပြေလျော့သွားတတ် ပါတယ်ခင်ဗျား ။
ဘုရားမှတစ်ပါး ကိုးကွယ်ရာ မရှိ ၊ တရားမှ တစ်ပါး ကိုးကွယ်ရာ မရှိ၊ သံဃာမှ တစ်ပါး ကိုးကွယ်ရာ မရှိပါခင်ဗျား ။ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရနိုင်သလို တစ်ကယ်ဖြစ်ချင် တစ်ကယ်လုပ်နိုင်ဖို့သာ လိုအပ်ပါကြောင်း အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းတို့မှ လွတ်မြောက်ကြ ပါစေ သတည်း ။
အိမ်ထောင် (၃) ခါ ကျဖူးတယ် …ဒါပေမယ့် အခု အချိန် ထိ အပျိုစင် ပဲရှိသေးတဲ့ မိန်းကလေး